Vaovao - Fanamarinana ISO vaovao amin'ny 8 aprily
Fanamarinana ISO vaovao amin'ny 8 aprily
Ny fahafoizan-tena dia manao asa. TAA dia nanolo-tena tamin'ny famokarana marokoroko nandritra ny 30 taona mahery, ary mampivoatra sy manavao hatrany manodidina ny serivisy fitsaboana eny ambonin'ny tany. Ankehitriny dia faly izahay manambara fa mahazo mari-pankasitrahana ISO 50001 2018 Energy Systems Systems --- Fepetra takiana miaraka amin'ny torolàlana amin'ny fampiasana sy RB / T 119-2015 Rafitra fitantanana angovo-Fepetra takiana amin'ny orinasa milina.
Ireo mari-pahaizana ISO teo aloha izay azontsika dia:
ISO 9001: Taratasy fanamarinana rafitra fitantanana kalitao mifanaraka.
ISO 14001: Taratasy fanamarinana ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana.
Amin'ny maha-mpanamboatra vy mahery vaika any Shina dia manana fitaovana famokarana tanteraka izahay ary fomba fifehezana kalitao henjana, izay ahafahanay mahazo ny taratasy ISO9001 milamina. Ny dikan-tsoratry ny taratasy fanamarinana dia manan-kery mandritra ny 3 taona, efa 15 taona teo ho eo no nahazoanay an'io taratasy fanamarinana io.
Nanome lanja lehibe ny resaka fiarovana ny tontolo iainana amin'ny famokarana izahay. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana tsy tapaka sy fanatsarana ny fitaovana famokarana, ny fizotran'ny famokarana dia sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana sy mahomby. Tamin'ny taona 2016, dia nanao fangatahana mora foana ihany koa izahay ho an'ny mari-pahaizana ISO14001 voalohany, ary izao dia nahazo ny mari-pahaizana ISO14001 faharoa.